यी ६ चर्चित खेलाडी : जसले दुई देशका लागि क्रिकेट खेले
काठमाडौं- क्रिकेट इतिहासमा केही यस्ता खेलाडी छन् जसले एक देशको लागि मात्र होइन दुई वटा देशका लागि खेलेका छन् ।
विभिन्न कारणले गर्दा खेलाडीले देश नै परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका छन् । धेरै क्रिकेटरले दुई वटा देशबाट क्रिकेट खेलेका छन् । जसमध्ये आज पाँच खेलाडीको चर्चा गर्दैछौँ, जो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा चर्चित पनि छन् :
१. ल्यूक रोन्ची : ब्याट्सम्यान ल्यूक रोन्ची अहिले न्युजिल्याण्डका लागि खेल्छन् । तर, योभन्दा पहिला अष्ट्रेलियाको टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका थिए ।
अष्ट्रेलियाको तर्फबाट रोन्चीले ४ वन डे र ३ टी-२० म्याच पनि खेले । रोन्चिले ४ वान डेमा ३८ को औसतले ७६ रन बनाए । तर, जब अस्ट्रेलियाको टिमबाट म्याथ्यू वेड र टिम पेन विकेट विकेटकिपर दौड अगाडि निस्के । तब उनले न्युजिल्याण्डबाट खेल्न सुरु गरे । हुन त उनको जन्म न्युजिल्याण्डमा भएको थियो ।
हालसम्म न्युजिल्याण्डबाट उनले ८१ वन डे म्याच खेलीसकेका छन् भने ६६ इनिङ्समा १३२१ रन बनाएका छन् । जसमा १ शतक र ३ अर्धसतक सम्मिलित छन् भने उनले न्युजिल्याण्डबाट४ टेष्ट म्याच पनि खेलेका छन् ।
२. भ्यान डर मेरवे : भ्यान डर मेरवेको जन्म दक्षिण अफ्रिकामा भएको हो। उनले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल दक्षिण अफ्रिकाका बाट खेले। उनले दक्षिण अफ्रिकाबाट १३ वान डे र १३ टी-२० खेले। उनले टी-२० क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाबाट अष्ट्रेलियाविरुद्ध डेव्यु खेल खेलेका थिए।
उनले १३ टी-२० म्याच मा १४ विकेट लिएका छन्। त्यसपछि उनि नेदरल्याण्ड्सबाट खेल्न लागे। नेदरल्याण्ड्सबाट खेल्दै उनले १२ टी-२० मा १७ विकेट लिएका छन्।
३. डर्क न्यानेस : डर्क न्यानेस नेदरल्याण्ड्सको टिमबाट आफ्नो अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटको शुरुवात गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो टी-२० डेब्यु इंग्ल्याण्डविरुद्ध गरेका थिए। बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर उनले नेदरल्याण्ड्स लागि दुई टी-२० म्याच खेलेर १ विकेट लिए।
त्यसपछि उनी अष्ट्रेलियाबाट खेल्न लागे र डर्क न्यानेस अस्ट्रेलियाको लागि १ वान डे र १५ टी-२० खेलेका छन्। उनले १५ टी-२० म्याचमा २७ विकेट लिएका छन्। यी खेलाडीले चेन्नई सुपर किंग्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरबाट आईपीएल खेलिसकेका छन् ।
४. इयोन मोर्गन : मोर्गन विश्व क्रिकेटकै सबैभन्दा सफल ब्याट्सम्यान हुन्। आयरल्यान्डमा जन्मेका मोर्गनले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय म्याच आयरल्यान्डको लागि नै खेलेका थिए।
नले आयरल्यान्डको लागि २३ वान डे खेले जसमा २३ इनिङ्समा ३५.४२ को औसतबाट ७४४ रन बानाए। जसमा एक शतक र पाँच अर्धशतक सामेल छन्।
त्यसपछि मोर्गन इंग्ल्याण्ड टिमसँग जोडिए। इंग्ल्याण्डको टिमबाट खेल्न थाले यति मात्र होइन मोर्गनले इंग्ल्याण्ड वान डे टिमको कप्तानी पनि सम्हाले। र, उनकै कप्तानीमा इंग्ल्याण्डले पहिलोपटक २०१९ मा एकदिवसीय विश्वकप जित्यो।
५. केपलर वेसल : केपलर वेसलले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटको शुरुवात अष्ट्रेलियाको टिमबाट खेलेर शुरु गरेका हुन्। बायाँ हाते ब्याट्सम्यान वेसलले कुल ४० टेष्ट म्याच खेले। जसमा ७१ इनिङ्समा ४१ को औसतले २७८८ रन बनाए।
यसबीच उनले ६ शतक १५ अर्धशतक बनाएका थिए। उनले कुल १०९ वान डे खेले जसमा १०५ इनिङ्समा ३४.३५ को औसतले ३३६७ बनाए।
केपलर वेसलले १९८२ देखि १९८५ सम्म अस्ट्रेलियाको लागि र साल १९९२ देखि १९९४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको क्रिकेट खेलेका थिए।
६. मार्क चेपम्यान : कुनै बेला हङकङको टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका मार्क चेपम्यान हाल भने न्यूजिल्याण्डबाट खेलिरहेका छन् । उनले न्यूजिल्याण्डबाट वानडे र टी-२० डेब्यूसमेत गरिसकेका छन् ।
अलराउन्डर चेपम्यानले हङकङबाट २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए । उनले २०१५ मा हङकङबाट खेल्दै यूएईविरुद्ध वानडेमा डेब्यू गरेका थिए ।
चेपम्यानले टी-२० मा २०१४ को विश्वपमा डेब्यू गरेका थिए । बंगलादेशको चटगाउँमा भएको सो विश्वकपमा उनले नेपालविरुद्ध खेल्दै टी-२० मा डेब्यू गरेको थिए ।
चेपम्यानले आफ्नो डेब्यू टी-२० मा उत्कृष्ट बनाउन सकेनन् । सो खेलमा उनले १२ बलमा १३ रन मात्र जोड्न पाएका थिए ।
डेब्यू टी-२० म्याचमा उनलाई नेपालका चर्चित स्पिनर बसन्त रेग्मीले बोल्ड आउट गरेका थिए । सो खेलमा नेपालविरुद्ध हङकङ ६९ रनमै अलआउट भएको थियो ।
चेपम्यानले डेब्यू गरेको टी-२० म्याचमा हङकङविरुद्ध नेपाल ८० रनले विजयी भएको थियो । टी-२० डेब्यू सुखत बनाउन नसकेन पनि उनले त्यसपछि भने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
लगातारको शानदार प्रदर्शनकै कारण उनले छोटो सयममै न्यूजिल्याण्डका राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने मौका पाइसकेका छन् । उनले हालसम्म ६ वानडे र २५ अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० म्याच खलेका छन् ।